चार महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ३७.८ प्रतिशतले बढ्यो – Banking Khabar
चार महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ३७.८ प्रतिशतले बढ्यो
बैंकिङ खबर । आयात र निर्यातबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ । नेपालले निर्यात र निर्यातजन्य बस्तुको उत्पादन बढाउन नसक्दा ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा देखिएको हो । आयातमुखी अर्थव्यवस्थाका कारण नेपालको व्यापार घाटाको आकार फराकिलो हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३७.८ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ५४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा निर्यात र आयातबीचको अनुपात ६.१ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात र आयातबीचको अनुपात ७.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
यो अवधिमा नेपालको वस्तु निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२९ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । उक्त अवधिमा नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुगत सामानहरुमा पोलिष्टर यार्न, जस्तापाता, कपडा, दन्त मञ्जन, जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैची, रोजिन, छाला, जुत्ता, जी. आइ. पाइप लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ । गन्तव्यका आधारमा हेर्दा, भारततर्फ १८.३ प्रतिशत, चीनतर्फ ८.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ २.२ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ ।
उक्त चार महिनामा कुल वस्तु आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेर रु.४८३ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १८.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात ३३.५ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात ४५.१ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ३६.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
अन्य देशबाट नेपालमा आयात गरिने वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाइजहाज, एम.एस. बिलेट, अन्य मेशिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जा, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, धान चामल लगायतका महङगो सामानहरुको आयत बढेको छ । तर, सिमेन्ट, कच्चा भटमासको तेल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, स्वास्थ उपकरण तथा औजार लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ ।
भन्सार नाकाका आधारमा कन्चनपुर भन्सार कार्यालय, कैलाली भन्सार कार्यालय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट गरिएको निर्यातमा ह्रास आएको छ भने अन्य भन्सार नाकाहरुबाट गरिएको निर्यातमा वृद्धि आएको छ । कन्चनपुर भन्सार कार्यालय बाहेक अन्य सबै नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
Marketing:- bankingkhabar[email protected] Contact-: 01-5705163